Sigiriya (Vatolampy Rock taloha) ~ Journey-Assist - Ny tena mahaliana
Pejy fandraisana » Fampahavian'i Sri Lanka » Sri Lanka » Asia » Eran-tany / Faritra » Sigiriya (Vatolampy Rock taloha)
Sigiriya - Ilay Liona Rock (Sigiriya Ny Vatolampy Ambony Fahiny)
4 Janoary, 2020
Sigiriya. Fampahalalana ankapobeny
Tantaran'ny Benteng Sigiriya
Torolàlana ho an'ny Sigiriya. Sari-tany. Tetika. Overview
Any an-tampon'i Sigiriya. Photo. Overview
Panoramas avy eo an-tampon'ny Sigiriya
Ahoana no hahatongavana any
Vidiny ao Sigiriya. Fomba fandidiana
Soso-kevitra alohan'ny hitsidihan'i Sigiriya
Hotely akaikin'ny Sigiriya
Weather akaikin'i Sigiriya androany + ramena
Sigiriya eo amin'ny sarintany
Sigiriya: fampahalalana ankapobeny
Ity fisintonana voajanahary ity dia hita ao afovoan'ilay nosy ary iray amin'ireo toerana fanaovana dihy malaza indrindra!
Sigiriya dia fantatra koa amin'ny hoe "Rock Rock". Raha ny tena izy dia lohasaha avo eo amin'ilay toerana nisy volkano iray efa lany tamingana. Nisy takelaka iray noforonina avy amin'ny lava-dranomandry, ary nisy manda iray naorina teo aminy tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana. Ny haavon'ny fantsona dia 170m.
Sigiriya amin'ny voninahiny rehetra
Ny sisa tavela amin'ity trano mimanda ity ihany no tafavoaka velona amin'izao androntsika izao, kanefa amin'ny alalany dia afaka mahita ny fahalehibeazana taloha amin'ity tranobe ity izy ireo.
Ny fidirana amin'ny lapa dia tamin'ny liona voalohany, izay nisy ny liona lehibe, izay nivoahan'ny anaran'io vatolampy io, na izany aza ankehitriny dia ny sisa amin'ity biby ity ihany no mijanona.
Liona amin'ny tongotra ao Sigiriya (liona rock)
Ny tantaran'ny manda Sigiriya
Sigiriya - ny tanàna mimanda taloha tamin'ny taonjato faha-5 Ny faritra manontolo dia mizara ho fizarana manaraka ireto:
Araka ny voalazan'ireo mpahay tantara, ny Castle Sigiriya dia iray amin'ireo singa maritrano marobe manintona indrindra eran'izao tontolo izao ary ny daty tamin'ny taona voalohany. Voatahiry tsara ny fiarovana. Ny drafiny dia mampiavaka ny fahasamihafana lehibe mandritra io vanim-potoana io sy ny fisaintsainana lalina. Araka ny drafitra, mirindra tsara amin'ny simetri-basy ny rindrina. Mandritra izany fotoana izany, ny firafitra namboarin'ny olona dia mahomby tsara amin'ny lafiny manodidina ary tsy manimba velively ny tontolo mihitsy.
Ny dikan-teny iray momba ny mpahay tantara dia nilaza fa natsangana tamin'ny fiarovana ny trano mimanda Sinhalese taloha Kassap, saingy taorian'ny nahafatesany dia navela ny lapa. Mandrapiha-14 sotrokely. nisy monasitista bodista iray. Izao dia ao amin'ny lisitry ny UNESCO World Heritage List ny voaro mafy Sigiriya.
Ny fangalarana arkeolojika dia nahafahana namantatra fa ny olona eto amin'ity faritra ity dia efa niaina tamin'ny vanimpotoana prehistorika. Ny dikan'izy ireo dia hita any anaty zohy.
Guide Travel Sigiriya
Ny drafitra ofisialy an'i Sigiriya
Ao amin'ny ankavia amin'ny sary dia ahitanao ny fidirana ofisialy mankany amin'ny manda Sigiriya. Izany no misy ny biraon'ny tapakila.
Eo an-tampony eo afovoany an-tsary dia mahita ny iray amin'ireo fivoahana avy any Sigiriya mankany amin'ny tehezan'ny mpifanolo-bodirindrina (1km) akaiky an'i Pidurangalu, izay tena mahaliana sy mendrika azy io. (Ity misy antsipiriany amin'ny antsipirihany ny tehezan'i Pidurangala eto)
HO ANAO SIGIRIA MAIMAIMPOANA
Ho an'ireo izay mitady toeram-piasana sy mandeha na aiza na aiza maimaim-poana, ity misy sarintany iray amin'ny andalana toa izany mankany Sigiriya.
Roundabout mankany Sigiriya, ho an'ireo mpankafy ny lalao rehetra
Ny zava-misy fa eo amin'ny làlana marina ianao dia milaza famantarana isan-karazany mampatahotra miaraka amin'ny bibidia sy voay asehon'ny loza. 🙂
Ny zavatra voalohany ho hitanao rehefa miditra ny faritry Sigiriya ianao amin'ny alàlan'ny fomba ofisialy dia ilay antsoina hoe Zaridainan'ny Sigiriya - Royal Park. Ankehitriny, kely dia notehirizina kely fa ny fahalehibeazana taloha dia mbola mahatsapa.
Misy fizarana telo ireto:
Zavamaniry rano. Eo am-pototr'i Sigiriya
Eto, amin'ny fotoana iray, misy loharano isan-karazany, hidin-trano, dobo, rafitra rafi-pandehanana miafina.
Ny ampahany voalohany. Zarinan'ny rano
Izy io taloha dia manana endrika marefo
Manaraka izany ny lalanao dia handalo fitambaran'ireo vato sy vato lehibe
Zaridaina vato. Sigiriya
Megaliths eo am-pototr'i Sigiriya
Aorian'ny fambolena vato dia manaraka ny zaridaina terrace. Kely sisa tavela aminy, fa ny lalana iray na ny iray manaraka ny lalana mankany amin'ny vatolampy, ianao handalo azy ireo.
Ho eny an-dàlana dia hahita vato tahaka ny kôka (satro) ianao.
Frescoes ao Sigiriya
Gallery miaraka amin'ny frescoes ao Sigiriya
Ny marika manokana dia ny galàlan misy frescoes, izay nisy tamin'ny 500 mahery, fa ny 18 ihany no tafavoaka mandraka androany.
Mampalahelo fa tsy fantatra ny tantaran'ireto frescoes ireto. Ary ireo vehivavy ireo dia tsy nasehon'izy ireo na nentin'izy ireo fanomezana.
Milofika ao Sigiriya
Aorian'ny faran'ny galerian'ny frescoes dia hisy làlana manaraka ny rindrin'ny Mirror.
Nandritra ny fotoana nanjakan'i Kassapa dia voatsindrona foana ny rindrina ka izay i Kassapa, ny nandehanana teo akaikiny dia nahita ny fitarainany hatrany.
Biriky ny rindrina. Nasiana plastera fotsy ho azy izany. Ankehitriny misy ampahany amin'ny rindrina dia rakotra andinin-tsoratra masina sy hafatra samihafa.
Eo amin'ny rindrin'ny Sigiriya dia misy soratra fa na dia 8 sotrokely aza. Fa manoratra zavatra eo amin'ny rindrina ankehitriny voarara!
Io fandraràna io dia nampidirina tamim-pahatsorana mba hiarovana ny soratra taloha.
Fampandrenesana ny fitaratra Mirrorain
Lavan'ny liona iray. Fidirana amin'ny lapa (fiarovana)
Fidirana amin'ny lapan'ny mpanjaka (fiarovana) any Sigiriya
Ankoatr'izany, eo amin'ny ilany avaratra amin'ny lemaka no antsoina hoe vavahadin'ny liona mankany amin'ny lapa mpanjaka. Rehefa nandalo ianao dia tsy maintsy hihanika haika 70 metatra manaraka ny lalana mideza alohan'ny hahatongavanao eo an-tampon'ny hantsana ary jereo ny sisa tavela amin'ny trano hanjakan'ny mpanjaka.
tohatra ambony rihana
Miomàna amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana sasantsasany eny an-dalana noho ny lazan'ny fiarovana Sigiriya amin'ny tontolo fizahan-tany.
Sehatra ho any an-tampony
Aza hadino ihany koa fa raha miakatra eo ambony rihana ianao ary eo ambanin'ny masoandro mamiratra, dia ny vatolampy iray miampy ny masoandro dia hamorona rivo-piainana hafahafa be.
Any an-tampon'i Sigiriya. Ireo sisan-javatra dia. sary
Any ambony rihana, avy amin'ny trano taloha misy ny lapan'andriana, dia misy sisa tavela
Ny sisa tavela amin'ny lapan'ny mpanjaka
Rava .. rava .. potika ..
Panoramas avy eo an-tampon'ny Sigiriya. sary
Any an-tampon'ny Sigiriya, tsy vitan'ny hoe afa-po amin'ny fandevenana ny egregor amin'ny sisa tavela ianao, fa mankasitraka ny panorama mahafinaritra izay misokatra eto ihany koa!
Panoron'ny kamory voajanahary (Sigiriya Vava) avy any an-tampon'ny Sigiriya
Fijery ny vato Pidurangala avy any an-tampon'ny Sigiriya
Amin'ny lafiny, ny vato ny Pidurangala, toerana tena mahaliana, izay tena manoro hevitra anao hitsidika izahay. Raha jerena eto ambany dia jerena amin'ny Pidurangals.
Sarin'ny Saha Sigiriya avy any ambony
Sigiriya. Ahoana ny fahitan'ny vorona azy
Ahoana ny fomba mankany Sigiriya
Afaka tonga amin'io fisintonana io avy amin'ny tanànan'ny Sri Lankanina rehetra ianao, na izany na tsy izany dia mila mifindra any DAMBULL ianao!
Avy any Dambulla mankany Sigiriya
Ireo fiara fitateram-bahoaka matetika 549/499 dia mandeha avy any Dambulla mankany Sigiriya.
Miala 6 ka hatramin'ny 19 ora isan'andro izy ireo.
40 minitra eo fotsiny dia ho any.
40 rupee ny saran-dalana.
Azonao atao ihany koa ny maka tuk-tuk ao Dambulla mankany Sigiriya, saingy tsy misy dikany izany, satria tamin'izany fotoana izany dia mitentina 800 rupee (amin'ny salanisa) ny lalana.
Avy any colombo
Ireo fiara fitaterana an'habakabaka mampahazo aina dia mandeha any Colombo mankany Dambulla.
Avy any Colombo ka hatrany Dambulla no tena mpandeha ny fiara fitaterana.
Avy any Matara, Tangalla, Panadura
Avy any Matara aloha dia afaka miditra any Colombo ianao.
Izany dia azo atao amin'ny fiara fitateram-bahoaka na fiaran-dalamby. Mitaky 4,5 ora ny dia.
Na dia avy amin'ny gara ao Matara ka mankany Dambulla aza misy ny bisy ny 2/48 misy efitrano fandraisam-bahiny sy fisakafoanana rivotra.
Mandritra ny 8 ora ny dia mankany Dambulla.
Ny sidina mitovitovy amin'izany dia tokony ampiasaina rehefa miala. avy amin'i Tangalla na Panadura.
Avy any Kandy
Ny fiara fitateram-bahoaka avy any Kandy mankany Dambulla manomboka amin'ny 6 a.m ka hatramin'ny 21 p.m.
Betsaka ny sidina marobe (laharana bus), ka tokony hazava ilay isa, satria efa eo amin'ny gara fitobiana.
Avy amin'i Anuradhapura
Avy any Anuradhapura ka hatrany Dambulla dia misy fiarabe laharana 42-2, 43 ary 69 / 15-8.
Avy amin'i Polonnaruwa
Avy any Polonnaruwa mankany Dambulla, fiara fitaterana no misy ny 41-2, 46, 48/27 ary 581-3.
Vidiny ao Sigiriya 2019-2020
Ny fidirana any Sigiriya dia somary lafo. Ho an'ny olon-dehibe, ary koa ny ankizy hatramin'ny 11 taona, ny vidiny 5400 rupees. ($ 30)
Ho an'ny ankizy hatramin'ny 6 ka hatramin'ny 10 taona - 2700 rupees. ($ 15)
Ho an'ny ankizy latsaky ny 6 taona miditra maimaimpoana.
Ny tapakila mankany Sigiriya dia misy fizarana roimata 3 - misaraka amin'ny fidirana lehibe, mankany amin'ny rindrina fitaratra ary amin'ny tranom-bakoka.
Vidim-bidy ny vidiny, fa araho ny rupee
Ora fiasan'ny Sigiriya
Ny fidirana dia misokatra amin'ny 7 ka hatramin'ny 18 andro tsy misy fiatoana.
Misokatra ny birao tapakila hatramin'ny 17.
Efa maizina ny andro tamin'ny 18.00. Tsy misy jiro eto Sigiriya.
Ny fotoana tsara indrindra ahafahana mandeha eto dia amin'ny 7 maraina, raha mbola tsy misy hafanana.
Ny fotoana tsara koa dia 15 ora, satria manomboka izao dia mihena ny isan'ny mpitsidika.
Aza hadino ny maka rano, satria tsy maintsy mandany adiny 3 fara fahakeliny ianao amin'ny fisafoana ilay kompleks, ary tsy mivarotra rano na aiza na aiza any amin'ny faritaniny izy ireo.
Fotoana tsara indrindra mitsidika an'i Sigiriya
Ny toetr'andro tsara indrindra amin'ny fitsidihana an'i Sigiriya dia ny volana desambra ka hatramin'ny martsa ary manomboka ny volana jolay ka hatramin'ny septambra. Mandritra io vanim-potoana io, tsy dia fahita firy ny orana any afovoan-tanànan'i Sri Lanka (izay misy ny fahasarotana), raha toa ny volana aprily sy novambra dia maro be amin'izy ireo.
Weather near Sigiriya. Azo tanterahina sy lavitra an'izany!
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/1cJbxgfAu7LbxhiC6
Sigiriya (Lion Rock) ao amin'ny sarintany
Hevitra ho an'i Sigiriya
Hevitra momba an'i Sigiriya (valin'ny Google)
Ny hevitra momba an'i Sigiriya (Tripadvisor)
Sigiriya dia iray amin'ny toerana mahaliana indrindra. Miaraka amin'ny tampon-dron'i Adan no tena nanaitra indrindra an'i Sri Lanka!
Lehibe ny fidirana amin'ny Sigiriya (ho an'ny Azia Atsimo Atsinanana), saingy mendrika izany. Hisy fihetseham-po marobe!